नेपाल आज | प्रचण्डले धोका दिए, फेरि हुन्छ युद्ध (भिडियोसहित)
प्रचण्डले धोका दिए, फेरि हुन्छ युद्ध (भिडियोसहित)
आइतबार, १६ मङि्सर २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्त खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ केही समय अघि चर्चामा रहे । चन्दा आतंक मच्चाएको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अभियोग दर्ता गर्यो । अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि फेरि अर्को मुद्दा थपेर हिरासत लम्ब्याउँदै गयो । अहिले उनी खुला रुपमा हिँडडुल गरिरहेका छन् । तर उनको व्यवहार भने भूमिगत शैलीको छ । नेपालआजजसँगको कुराकानीमा प्रकाण्डले आफूहरु खुलारुपमै राजनीति गरिरहेको बताएका छन् । यद्यपि उनका पार्टीका महासचिव विप्लवलाई भने सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएको धेरै भएको छ ।
प्रकाण्डले आफूहरुले एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट फेरि संघर्ष गर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीले गर्ने आह्वानमा फेरि पनि युवाहरु आउने दावी गरेका छन् । १० वर्षसम्मको जनयुद्धको राप ताप भोगेका, देखेका युवाहरु फेरि त्यस्तै संघर्षको कार्यक्रममा किन आउने भन्ने सवालमा उनले क्रान्तिमा थकान नहुने जवाफ दिए । संघर्ष चर्किदै जाँदा जनसेना, जनअदालत र जनसरकार पनि गठन हुने उल्लेख गरे । प्रकाण्डले सिके राउत विदेशबाट सञ्चालित देश टुक्रा पार्न खोज्ने तत्व भएको बताए । नेपालको वर्तमान राज्य सत्ता नै विदेशीको दलाली गर्ने मतियारको रुपमा रहेकोले एकाध व्यक्तिको कुरा यतिबेला कम महत्वपूर्ण भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
वर्तमान राज्यसत्तालाई अस्वीकार गरे पनि विकृति र बेथिति अन्त्यको चाहना चाहिँ वर्तमान सरकाबाटै होस भन्ने उनको कामना छ । उनले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुमा सरकार आफैं जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । प्रकाण्डले भने, ‘सरकारले नै हत्यारा पत्ता लगाओस् भन्ने हो । लगाएन भने हामी दबाब सिर्जना गर्छौं ।’
देशका मुख्य भ्रष्ट व्यक्तिहरु सरकारमा रहेकाहरु नै हुन् भन्ने उनको ठहर छ । तर नेकपाले कालोमोसो चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरुलाई किन दल्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामीले गर्ने कारबाहीमा कुनै पनि भ्रष्टहरु छुट्ने छैनन् । कोही पनि छुट्ने छैनन् भनेपछि सबै पर्छन भनेको हो । बुझ्नु भो त ? ’ प्रकाण्डले नेपालआजसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेका धारणाको सार निम्नानुसार छः
‘ एकीकृत जनक्रान्ति एक दुई वाक्य वा एकछिनको बसाईमा बुझिने कुरा होइन । यसलाई व्याख्या गर्न समय लाग्छ । सुन्ने धैर्यता पनि चाहिन्छ ।
संसदवादी दलहरुले विभिन्न नाराहरु दिएर चुनाव जिते । त्यो बेलाको नेकपा एमालेलाई जनताले जनादेश दियो । वा माओवादीसहितको मोर्चालाई जनादेश आयो । दुई तिहाई नजिकको सरकार बनेको छ । यो सरकार बनेको नौ महिना भयो । यति बेलासम्म जनताको पक्षमा जनताले देख्ने गरीकन एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । हामीले संसदवाद भनेकै राष्ट्र र जनताविरोधी व्यवस्था हो है भनेका थियौं ।
देश र जनताको विरुद्धमा क्रियाकलाप गर्ने भनेका थियौं । त्यो पुष्टि भएको छ । राष्ट्रघात पनि डरलाग्दो भएको छ । विगतको आन्दोलन र जनयुद्धबाट संघर्षबाट प्राप्त अधिकार पनि खोसिने क्रममा छ । १९५० देखि यता राष्ट्रियतामा दखल गरेका छन् विस्तारवादीहरुले । नेपाली जनताको आफ्नै सत्ता स्थापनाका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा हामीले गरेका हौं । हामी राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका छौं । जनतामा जान्छौं । आवश्यकता पर्दा संघर्षको जुनसुकै रुप पनि अवलम्वन गर्छौं । यो दिशातिर पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । यो क्रान्तिमा समाहित गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हामी संघर्ष गरिरहेका छौं । यी आधारभूत आवश्यकता राज्यले जिम्मा लिने काम गर्नु पर्छ । राज्यले जनतालाई रोजगारी पनि दिनु पर्छ । यो दायित्व राज्यको हो ।
प्रचण्डजीले शुरुमा जो भन्नु भएको थियो, जे गर्नुभयो त्यो मूलभूत रुपमा सहि थियो । जसका कारण जनयुद्ध शक्तिशाली भयो । पछिल्लो दिनमा उहाँ त बदलिनु भयो । गन्तव्य छाडेर अन्यत्र गएपछि नेपाली क्रान्तिलाई धोका भयो । अहिले देश अप्ठ्यारो ठाउँमा छ । अब यता हाम्रो कुरा हेर्दा खेरी के छ भन्नु हुन्छ भने विगतमा राष्ट्र र जनतालाई भएको धोकाको पूर्ति गर्न नयाँ पार्टी गठन भएको हो । अबको वैज्ञानिक क्रान्तिका लागि भएको आन्दोलन हो । राष्ट्रिय आत्ममर्पणवादको अन्त्य गर्ने हो । जनताको राजनीतिक अधिकार र सत्ता स्थापना र धोकाको अन्त्य गर्ने दायित्व हो ।
जनक्रान्ति सफल हुन अब धेरै समय लाग्दैन । जनताले दशकौं पर्खिन पर्दैन । किनभने देशको संकटको अन्त्य नगर्ने हो भने यसले त देश र जनताको थ्रेट गरिरहेका छ । जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरुको अनिवार्य दायित्व देशको अस्तित्व रक्ष ागर्ने पनि हो । तर खै त ? वस्तुस्थिति यस्तो बनेको छ संघीय लोकतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्था एक वर्ष नपुग्दै जनताका अगाडि सर्वांग भएको छ । जनताको घृणाको वस्तु भएकोछ । यसकारण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले ठीक तरिकाले हल गर्न आवश्यक छ ।
जबसम्म जनता र राष्ट्रको समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म क्रान्तिबाट हार खान हुन्न । धोकाबाट निराशा त हुन्छ । समस्याले चेप्दै चेप्दै आएपछि त्यो धोका विद्रोहमा बदलिन्छ । यो एक वा दुई पटक भन्दैमा हुँदैन । मैले पूर्वजनमुक्ति सेनाका युवाहरुको पनि मैले कुरा सुनेको छु । पुरानो तरिकाले राजनीति असम्भव पनि छ । हामीले हाम्रा विचार अगाडि सारेपछि जनता आशावादी भएका छन् । हामीले जनताको मुद्दा उठाएपछि आशावाद पैदा भएको छ । जनताका लागि हामीले काम गरेपछि युवाहरु प्रभावित हुनेछन् । परिवर्तनको विधिगत तरिकालाई समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले त माखो पनि मारेन । जनता निराश छन् । पछिल्लो समय सामाजिक अपराध पनि बढेको छ । सरकारले यसैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्छ्, यसैलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भन्छ । कम्युनिष्टहरुले पार्टी, आन्दोलन, सिद्धान्तको बदनामी गर्ने तरिकाले खेल भइरहेको छ । देशको मुख्य सत्रु भनेको आत्मसमर्पणवादी तत्व हो । जनताको राजनीतिक अधिकारलगायतको सन्दर्भमा दलाल पूँजीपति वर्गको भ्रष्ट गिरोह अर्को सत्रु हो ।
त्यसकारणले यसैकाविरुद्धको संघर्ष नै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रम हो । जनसंघर्ष र जनकारबाहीबाट हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं ।
व्यक्ति विशेषको हाम्रो कुरा होइन । यो देशलाई रसातलमा पुर्याउने तत्व भनेको दलाल पूँजीपति वर्ग हो । त्यसको सत्ता, व्यवस्था र नेतृत्वकर्ताहरु हुन् । यथार्थ यहि हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्दा कोही पनि भ्रष्ट उम्किन पाउँदैनन् । राष्ट्रघाती, फटाहाहरु कोही उम्कन पाउँदैनन् ।
यस्ता तत्वहरु छन् । उदाहरणका लागि सिके राउतलाई नै लिउँ न । सिके राउत देशलाई विखण्डन गर्न चाहने, विदेशीबाट सञ्चालित व्यक्ति हो । त्यो पनि गम्भीर कुरा छ । त्यो भन्दा गम्भीर कुरा अर्को पनि छ । त्यत्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार नै राष्ट्रघाती भयो । योसंँगको मुद्दा पनि कमजोर बनाउन सकिदैन । सरकार नै राष्ट्रघात भएको छ । त्यसपछि त्योसँग जोडिएर आएको अरु तत्वहरुलाई पनि ठीक गर्नु पर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने क्रान्ति भनेकै पुराना परम्परावादी, राष्ट्रलाई अहित हुने प्रकृतिका विषयहरु हटाउनका लागि हुने गर्छ । पुरानो राज्यसत्ता, शासनहरुको अन्त्यका लागि क्रान्ति हुन्छ । जनताको शासन ल्याउनका लागि क्रान्ति हुन्छ । यसबाट जनसेना, जनअदालत त अनिवार्य कुरा हो । त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । जनसरकार नै गठन भइहाल्छ नी । यसमा के अचम्म मान्नु पर्छ र ?
पहिलो कुरा त हत्या हिंसा बलात्कार रोक्नेसरकारकै दायित्व हो । यसले नगरेपछि हामीले गर्ने कुरा आउछ । साउनमा निर्मलाको बलात्कार र हत्या भयो । म असोजमा हिरासतबाट मुक्त भएँ । बाहिर र भित्रबाट म यो विषय नियालिरहेको छु । निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा सरकार निकम्मा भएको, लापरबाह भएको देखेपछि मैले हिरासतमुक्त हुनेसाथ अब निर्मलालाई जनताले न्याय दिनु पर्छ भनेर बोलेको थिएँ । निर्मलाको केसलाई राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्ने छौं । अर्को कुरा हत्यारा नै संरक्षण सरकारले गरिरहेको छ । सरकार नै बलात्कारी र हत्यारा बनिरहेको छ । राज्यले नै गरिरहेको छ यो सबै अपराधहरु । निर्मलाको हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गर्न हामी निरन्तर संघर्ष गर्छौैं ।
पहिलो दायित्व त फेरि यहि राज्यसत्ताको काम हो नी । भएन भने त हामी गर्छौं गर्छौं । जनताको बीचमा अनि सार्वजनिक गर्छौं ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ प्रवक्त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’
ओली राजा महाराजा भन्दा पनि निरंकुश बने, अब ढाल्नु पर्छ (भिडियोसहित)
बीएनए र ग्रिनल्यान्डलाई अन्तर विद्यालय बास्केटबलको उपाधि